ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 အတွက်ရာသီအစကတည်းက: နာက | Apg29
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 အတွက်ရာသီအစကတည်းက: နာက
" အကယ်. ဣသရေလအမျိုးကိုဖြစ်ပျက်မမီးလောင်တ
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 အတွက်စေလွှတ်ရာစုအံ့ဖွယ်၏စီးရီး။
ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကို "နာကျင်မှုမှာမွေးဖွားတစ်ဦးကတိုင်းပြည်," နှင့်လည်း Minnie လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိရာအောက်ပါ, ရှုပါ။
ခရစ်ယာန်ကောင်းကင်ဘုံ TV7 အဆိုပါရာစုအံ့ဖွယ်အပြန်မပို့စတင်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်နှောင်းပိုင်း 1960 မှ 1948 ခုနှစ်ကြေငြာလိုက်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုး၌ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖော်ပြရှစ်သစ်ကိုအစီအစဉ်များကိုစုစုပေါင်းရှိပါတယ်။
ရာသီအလိုက်ကြယ်ပွင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကို "နာကျင်မှုမှာမွေးဖွားတစ်ဦးကတိုင်းပြည်," ကိုကြည့်ပါနှင့်လည်း Minnie လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှိရာအောက်ပါ။
ဧပြီလ 1944 မှာတော့အော့ဇျဝမှရထားဖြင့်သူ့မိသားစုနှင့်အတူ Minnie ။ သူမ၏မိခင်, ဖခင်နှင့်တူတလမ်းတည်း, Minnie နှင့်အခြားသောအတွက်သူမ၏ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဝင်လေ၏။ ဒါဟာ Minnie သူတို့၏မိဘများကိုမြင်လျှင်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ခဲ့သည်။
Minnie အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် says:
" အကယ်. ဣသရေလအမျိုးကိုဖြစ်ပျက်မမီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့သညျ။ "
အိမ်ရှင်မဖြစ်ပါတယ် ရုဗင် Agnarsson ကောင်းကင်ဘုံ TV7 မှ မက် Federmann ဂျူးအမျိုးသားရံပုံငွေအဖွဲ့ကနေ။
SEASON သည် START 23/9: အပိုင်း 9: နာကျင်မှုမှာမွေးဖွားတစ်ဦးကတိုင်းပြည်
တနင်္လာနေ့။ 20:15 တီဗီရုပ်သံလိုင်း။
ထိုအခါ ဒီမှာ Play စတိုးတွင်။